Dadkii ka soo cararay dagalada ee magalada baxar dhaar ku sugnaa xeryaha soo barokacayaasha ayaa sheegay in loo diiday in ay magalada dhaxdeeda dhaqdhaqaaq ka sameeyaan - ዜና ከምንጩ
Markii dadkaasi loo diiday in magalada ay dhax socdaan waxa ka danbaysy xaalad in dadkaasi ay dib ugu laabtaan meelihi ay ka yimadeen.
Waxa wargayska addis maleda uu waramay dadkii ka soo barokacay wuqooyiga dalka dagaalada awgeed oo sheegay in maamulka magalada baxar dhaar uu diiday in ay magaalada ka dhax dhaqdhaqaaqaan kadib arintaasina ay dib ugu laabteen meelihi ay ka yimaadeen.
Waxa kale oo ay wargayska uu sheegeen in dadka soo barokacayaasha ah ee ku sugan magalada baxar dhaar ay kuwii wax haystay guryo kiraysteen, kwii aan wax haysanina ku suganyihiin meelaha loo diyaariyay soo barokacayaasha, balse xiligan xaadirka ahna loo diiday in si xor ah ay magalada uu dhax socdaan kadib markii bayaanka xalada dagdaga ah ee guud ahaan dalka lagu dhawaaqay.
Si gaar ahna dadkii ka soo barokacay meelaha waag kimra ee gobolka saqota oo dhawr bilood ku sugan magalada baxar dhaar ayaa sheegay in ay arintani lamo filaan ku noqotay oo xoriyadii iyo cawimadii ay halkaasi ku haysteen laga qaaday dhaqdhaqaaqina laga joojiyo.
Wiil dhalinyaro ah oo aan rabin in magaciisa la sheego oo uu waramay wargayska ayaa yidhi maamulka magalada oo magalada ka hawl galiyay dad sharciga ilaaliya ayaa waxa ay bilaabeen in cidii aan haysanin aqoonsiga magalada baxar dhaar wadooyinka laga raafo oo xabsiyada lagu xidho. Waxa kale oo uu wiilkaasi dhalinyarada ah sheegay in soo barokacayaashii guryaha kirada ah ku jiray iyo kuwii xeryaha ku sugnaaba gaar ahaan dhalinyarada hadii lgu arko ayaga oo magalada dhax socda in la xidho.
Waxa sida oo kale la sheegay in dadkii soo barokacayaasha ahaa aanay haysanin aqoonsi magalada baxar dhaar ah sidaasi darteedna ay caqabad ku noqotay in ay magalada dhax socdaan, waxa intaasi uu dheer in ay xadhig iyo silicba mutaystaan.
Sida uu sheegay wiilkaasi dhalinyarada ah ee aan rabin in magaciisa la sheego todobaadkii la soo dhaafay waxa 30 soo barokacayaal ah oo magalada dhax socday la yidhi ma haysataan aqoonsi magalada baxar dhaar ah waxaana loo taxaabay xabsiga. Markii ay hal maalin xidhnaayeen ka dibna waxa la siiyay amar ay magalada kaga baxaan oo waxa ay uu sii socdaan meelihii ay ka yimadeen.
Waxa kale oo uu wargaysku soo ogaaday in si gaar ah soo barokacayaashi ugu horeyay ee magalada baxar dhaar soo galay ay ka argagaxeen hawsha ay wdaan sharci ilaaliyaasha maamulka magalada ee ay ugu diideen in ay magalada dhax socdaan oo todobaadki la soo dhaafay laga bilaabona meelhii ay gaadidka ku tagi karayeen ay gaadiid uu raaceen meelihi aan gaadiidku ka jirinna ay laug ku tageen oo meelihi ay hore uga yimaadeenna dib ugu laabanayaan.
Waxa kale oo la sheegay in muwaadiniinti ka soo barokacay meelihii ay dagaaladu ka jireen ee markii ugu horaysay soo galay magalada baxar dhaar ee ku sugnaa xeryaha iyo kuwii soo galay xeryahaasi xiliyadii ka danbaysayba ay xeryahaasi ku suganyihiin ilaa inti warkan la soo diyaarinayay. Waxa kale oo uu wargaysku soo ogaaday in si gaar ah dadkii soo barokacayaasha ahaa ee xiligii ugu horeysay soo galay magaalada ay ku badanyihiin haween iyo caruur yaryar marka la barbar dhigo kuwii ka danbeeyay.
Wargayska addis maleda oo dhagaystay cabashooyinkii ay dadkaasi soo barokacayaashu sheegteen ayaa isku dayay in uu wax ka waydiiyo maamulka magaalada iyo masuuliyiin kale oo maamulkaasi ka tirsan balse qaar tilifoonadoodi ka jawaabi waayay iyo qaar yidhi arintaasi kama jawaabi karno awgeed wax war ah in uu ka soo waramo wrgaysku wuu awoodi wayay.
አዲስ ማለዳ Hidhaar 11 2014 No 22
Total views : 7512027